Somaliland oo dekedda Berbera ku qabatay markab hub siday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidanka amaanka xeebaha maamulka Somaliland ayaa sheegay iney qabteen hub saarnaa Markab kusoo xirtay dekedda magaalada Berbera.
Markabka ayaa Alaabooyin u siday Ganacsato reer Somaliland ah ayaa hubkaas laga helay kadib markii laga rogay alaabtii saarneyd. Wararka ayaa sheegaya in Hubkaas oo isugu iskugu jiray Mid culus iyo Mid fudud.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, Cali Warancadde oo arrintan uga waramay BBC-da ayaa sheegay in Wakhtigii Alaab uu Berbera u siday laga dejinayay uun lagu arkay Hubka Markabku sido islamarkaana Hubku aanu ku jirin Qoraalka muujinaya Qalabka uu sido ee uu soo gudbiyay.
“Markabku wuxuu soo galay Dekedda, waxaanu Berbera u siday Bagaash iyo Gaadiid, markaa kolkii laga rogayay ayaa lagu arkay Hub Ciidan oo ku dhex jira, Hubkaasina runtii kumuu jirin Maanofeeska uu soo gudbiyay, markaa waxay noqontay inaanu baadhno si aanu u ogaano Hubkaas Sharciyaddiisa iyo cida leh iyo meesha uu ka yimid” ayuu yiri Cali Warancadde.
Wasiirku waxa uu faahfaahiyay Noocyada Hubkan Markabku siday “Wallaahi wuu badan yahay Hubku, waxaa ku jira Baabuurta Gaashaaman iyo Artilariga boqol iyo dhawr iyo labaatanka Milimitirka ah baa ku jira, Beebee baa ku jira, dhawr baabuur oo kuwa Tiknikada ah baa ku jira, waxaa ku jira baabuurta Qufulan ee Ciidamadu fuulaan, waxaa ku jira Baabuurta kale ee Balad buruufka ah (Aan rasaastu Karin) baa ku jira, doon weyn oo kuwa dagaalka ah ayaa ku jirta” ayuu wasiirku yiri.
Wasiirku waxa uu sheegay inay baarisi socoto. Waxa uu sheegay in Nimanka wada Markabku sheegeen inay Sudan laga soo saaray Hubka balse aanay hayn wax caddayn ah sidoo kalena ay u sii jeedaan Dubai.
Wasiirku waxa uu sheegay inay gacanta ku haynayaan inta laga helayo cidii lahayd iyo meesha uu Hubkani u socday.
Warar kale oo madaxbanaan oo la helayo ayaa sheegaya in kabtankii markabka loo taxaabay xabsiga, kaddib markii uu sheegi waayay meesha rasmiga ah ee hubkan u wado iyo cidda iska leh.
IGAD: Alshabaab ka joojin karaan booqashada madaxweynaha Turkiga ee Muqdisho